Fiaraha-miasa amin’ny Unesco: hotrandrahin’ny « Teratany » ny vakoka Sakalava - ewa.mg
News - Fiaraha-miasa amin’ny Unesco: hotrandrahin’ny « Teratany » ny vakoka Sakalava
Sonia roa sosona. Notanterahina, omaly tetsy amin’ny foiben-toeran’ny Comnat/Unesco Behoririka, ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireo sy ny fikambanana « Teratany » hampiroboroboana ny vakoka sy ny kolontsaina. Tafiditra ao anatin’izany ny nahazoan’io fikambanana io vola 20 000 dolara ho amin’ny fandaharanasa hanombohana ny tetikasa lalana nizoran’ny fanandevozana sy ny lalana ho an’ny vakoka sy kolontsaina, ho an’ny Sakalava tamin’ny taonjato faha-17 sy faha-18. Hiteraka firoboroboan’ny fizahantany sy fanomezan-kasina ny vakoka eto amintsika izao fanohanana entin’ny Unesco izao. Hahazo tombony koa ny eny ifotony ankoatra ny fahafantarana ny tantara. Hojerena ny lafiny tantara sy ny lalana nizorana ary koa ireo lovantsofina. Hohamarinina eny an-toerana miaraka amin’ny eny ifotony izany. Hisy ny koa ny firaketana amin’ny antontan-kevitra sy ny horonantsary. “Zava-dehibe ity tetikasa ity. Fanohananay ny vinan’ny fitondrana amin’ny fisarihana mpizahatany manoloana ny fananantsika harena miavaka sy vakoka manana ny maha izy azy”, hoy ny sekretera jeneralin’ny Comnat/Unesco, Ravelojaona Manda Herilaza. Nambarany fa ho maro ireo mpitsidika ho avy. Hiforona ny asa ary hiakatra ny harinkarena.
Nahazo tohan’ny Unesco koa ny fikambanana Heal amin’ny alalan’ny Fako voaavaka misy rindra (Favori). Hahazo tombony amin’ny tetikasa ny EPP Mahamasina sy ny EPP Mandraka ary ny Ecole primaire protestante Moramanga. Miompana amin’ny fanodinana fako an-tsekoly izany. Hisy ny fanofanana ny tanora amin’ny fanavahana ny fako. Hitohy amin’ny fifaninanana amin’ireo sekoly izany ankoatra ny fanentanana samihafa momba ny ako. Eo koa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ireo reny hahazoan’izy ireo mizaka tena eo amin’ny fiainana.
L’article Fiaraha-miasa amin’ny Unesco: hotrandrahin’ny « Teratany » ny vakoka Sakalava a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina - Sakalava - UNESCO - Vakoka
Nitrangana asan-dahalo nahatsiravina namoizana ain’olona tsy manan-tsiny indray, tany amin’ny Distrikan’i Sakaraha, Faritra Atsimo Andrefana, ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo, tokony ho tamin’ny iray ora naraina. Mpivady mpivarotra iray no maty novonoin’ny malaso folo lahy nitam-basy tamin’ny fomba feno habibiana tao an-tranony, tao amin’ny Fokontany Andoharotsy, Kaominina ambanivohitry Vineta. Rehefa tafiditra tao amin’ity tokantrano sady toeram-pivarotana ity ireo dahalo, dia norarafan’ireo tsy mataho-tody tifitra variraraka nanandrify ny fony ireto mpivady natory teo am-pandriana, ka maty tsy tra-drano. Ary nalain’ireo malaso tamin’izay ny vola vidin’entana rehetra maty nandritra ny herinandro, niampy entam-barotra sy fanaka lafo vidy tao an-trano zakan’ireo olon-dratsy. Vita izay, dia nampidiran’ireo dahalo bozaka tao an-trano misy ny razana, avy eo nodoran’izy ireo, may kila forehitra tao ny fatin’izy mivady. Renim-pianakaviana iray hafa sendra nivoaka kosa no naratra mafy notifirin’ny dahalo. Raha ny tati-baovao voaray, dia naharitra ora iray nahery ny fanafihana nataon’ireo malaso tao amin’ity tokantrano ity. Noho ny tahotra, dia tsy nisy sahy nivoaka ny tranony avy ny mponina teo an-tanàna. Eric ManitrisaL’article Sakaraha : Mpivady notifirina dia nodorana ny tranony a été récupéré chez Midi Madagasikara.
OMH: ampy tsara ny famatsiana solika
Manoloana ny feo mandeha miparitaka any anaty tambajotra sosialy, milaza fa tsy ampy ny famatsiana solika, ny lasantsy SP 95, nanadihady nitety ny toeram-pivarotana solika eto an-dRenivohitra, ny Ofisy Malagasy misahana ny vokatra solika (OMH), sady nijery ny tahirin-tsolika amin’ny ankapobeny.Hita fa amin’ireo toby miisa 54 misy eto an-dRenivohitra, iray ihany no nanana olana tsy nisy tahiry satria nisy tsy firindrana ny fomba famatsiana.Ankoatra izany, namoaka fanambarana iombonana koa ny Vondron’ny mpandraharaha solika eto Madagasikara (GPM) fa na eo aza ny famaranana ny fomba hikajiana ny vidin-tsolika, manohy ny asa fihariany andavanandro hatrany izy ireo ka ao anatin’izany ny fanafarana solika sy ny vokatra solika avy any ivelany.Manamafy, araka ireo voalaza ireo ny OMH, fa mizotra araka ny tokony ho izy ny famatsiana solika eto amintsika. Etsy ankilany, andrasana ny hivoahan’ny fomba hikajiana ny vidin-tsolika ary indrindra, ny fidinan’ny vidiny araka ny toky nomen’ny filoham-pirenena.Njaka A.L’article OMH: ampy tsara ny famatsiana solika a été récupéré chez Newsmada.
ANTANANARIVO SALAMA : 4000 ny mpandray anjara
Fahombiazana ny hazakazaka nokarakarain’ny fiangonana Advantista natao teny Imahamasina ny Alarobia 01 Aprily 2019. Nahatratra 4000 ireo nandray anjara nahitana ankizy, tanora ary teo ihany koa ireo mpihazakazaka matianina. Tonga nanokatra izany ny tale jeneran’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, Rakotozafy Rosa. Maro noho izany ireo loka nozaraina tamin’ity hazakazaka ity. Nizara roa ireo halaviran-dalana nosafidian’ny mpandray anjara ka teo ny roa kilometra sy ny dimy kilometatra. « Fototry ny fahasalamana ny fanatanjahantena ka izay no nahatonga anay nikarakara izao hazakazaka izao. Ilaina ny vatana salama mba hisian’ny fanahy salama ary afahana mifehy ny fihetseham-po », hoy ny filohan’ny fiangonana Advantista manerana ny ranomasimbe indiana, Pasitera Herinirina Jesmin. Tanjona ny ahazoan’ny vahoaka fahasalamana satria rehefa salama izy ireo dia mandroso ny firenena. Fantatra ihany koa fa betsaka ireo teti-bolam-panjakana raha ny resaka fahasalamana ka tokony ho karakaraina ny vatana mba ho salama mandrakariva. Tsy mijanona amin’izao fanatanjahantena izao ihany ny hetsika karakarain’izy ireo fa mbola hisy ny « expo santé» atao etsy amin’ny Parvis Analakely ny 13 sy 14 mai 2019 ho avy izao. Hisy ny fitiliana ireo aretina maimaim-poana, toy ny sida…Hentanina ny mponina rehetra hitsidika io hetsika io. Hiarahana amin’ny ministeran’ny fahasalamana ny « expo santé». Nirina R. Cet article ANTANANARIVO SALAMA : 4000 ny mpandray anjara est apparu en premier sur déliremadagascar.
21 taona izao ny nisian’ny Apem Paiq (1), mpampindram-bola ho an’ny mpandraharaha madinika. Kendren’ny Apem manokana ny hanampy tosika ireo olona sahirana, hamolavola ny antom-pivelomany ka hifantoka amin’izany tanteraka. « Izay mahay miasa, tsy matahotra mindrana », hoy ny talen’ny Apem, Rasoanarivo Rihatiana. Tsy mitaky antoka momba ny fitaovana koa ny Apem fa fanomezan-toky iombonan’ny mpindrana amina olon-kafa.Ampiana amin’izany ireo manana tetikasa madinika, hahazoana famatsiam-bola hatramin’ny 6 tapitrisa Ar. Miainga avy amin’izany ny ady amin’ny fahantrana. Na izany aza, vitsy ihany ny Malagasy tena mitodika any amin’ny fandraharahana. Koa teraka izao ny fiaraha-miasa eo amin’ny Apem sy ny Miarakap (2), sampana iray mpamatsy vola ny orinasa madinika sy salantsalany sy ireo izay vao manomboka miasa amin’ny safidiny. Momba ny fambolena sy ny fiompiana, ohatra, miantso ireo fikambanana na ONG, toy ny GIZ, ny Prosperer, ny Miarakap ho afaka manampy ny lafiny teknika sy manome fiofanana momba izany ho an’ny mpindrana.Hampindram-bola olona 15 000 Tanjona amin’izao fiaraha-miasan’ny roa tonta izao ny hampindram-bola olona 15 000 hatramin’ny taona 2023. Lalana iray hialana amin’ny tsy fanaran-dalàna koa izany (informel) sy famoronana asa. Efa zatra manome tolotra sahaza ho an’ireo izay tonga ao aminy ny Apem. Ankoatra ny vola indramina, eo koa ny fampiofanana amin’izay hatao. Resy lahatra ny Miarakap ka nametraka renivola miasa ao amin’ny Apem. Hatevenina, araka izany, ny famatsiam-bola hisarihana olona maro, indrindra ny tanora, na ireo efa manana ny ataony ka mila hatsaraina sy hampitomboana.“Mahafaly anay ny manampy ny Apem mijoro ara-dalàna sy manana fanamby hampiakatra ny harinkarena”, hoy ny mpiandraikitra ao amin’ny Miarakap, Rtoa Alia Drouin. Tanteraka izao famatsiam-bola izao noho ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny Miarakap sy ny Coopération de Monaco, namatsy vola ny fanampiana teknika talohan’ny nandraisana fanapahan-kevitra amin’izao fiarahan’ny roa tonta izao. Tsiahivina fa atao hanohana ireo fianakaviana sahirana hampitombo ny vola miditra ny Apem. Vehivavy ny 70 % ny mindram-bola ao aminy. R.Mathieu Apem Paiq (1): Association pour la promotion de l’entreprise-Projet d’appui pour les initiatives des quartiers (Faritra Analamanga sy Itasy)Miarakap* : Afaka mampindram-bola 100 tapitrisa hatramin’ny 1 miliara ArL’article APEM PAIQ sy MIARAKAP: miara-miombon’antoka ho amin’ny fampindramam-bola a été récupéré chez Newsmada.
Novaina ny fomba fandrefesana ny « comptes nationaux ». Natao nanaraka ny fenitra « système de comptabilité nationale 1993 » (SCN-93) izany raha toa ka SCN-84 ny teo aloha. Vokatry ity fanavaozana ity dia nahitana fiakarana 16 % ny hari-karena faoben’i Madagasikara niainga tamin’ny « base 2007 ». Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny 8 mey 2019 teny amin’ny Carlton Anosy ny « comptes nationaux » na ny toekarena sy ny hari-karena faobe araka ny fandrefesana vaovao. Nambaran’ny tale jeneralin’ny INSTAT, Romalahy Isaora Zefara fa fomba fandrefesana ny fahasalaman’ny toekarena ny « comptes nationaux ». Atao isaky ny dimy na folo taona ny fandrafetana azy mba hijerena ny fivoaran’ny toekarena sy hampitahana ny teo aloha sy ny ankehitriny. Kajiana ao anatin’ny « comptes nationaux » ny fitambaran’ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ireo seha-pihariana samihafa toy sehatra fototra, sehatra faharoa, sehatra fahatelo sy ny maro tsy voatanisa. Ankoatra izany dia nampahafantarina tamin’io fotoana io ny « indice des prix à la consommation » (IPC) vaovao. Fantatra tamin’izany fa 7 % ny tahan’ny fiakaran’ny vidim-piainana. Lasa ny fototra tamin’ny taona 2016 no nampiasaina nandrafetana ny IPC raha toa ka fototra tamin’ny taona 2000 izany teo aloha satria tsy mitovy ny vidin’entana tamin’ny taona 2000 sy ny 2016. Niova ihany koa ny kojakoja nilain’ny isan-tokantrano tamn’ireo vanim-potoana ireo. Ohatra lasa tao anatin’ny kajy ilain’ny isan-tokantrano ny fividianana fahana raha toa ka tsy tao izany tamin’ny taona 2000, hoy ny tale jeneralin’ny INSTAT. Noho izany, natao hijerena ny fivoaran’ny toe-bola ampisain’ny isan-tokantrano ny IPC. Entina handrefesana ny toekarena, ny fivoaran’ny tolotra sy ny tinady sy ny fivoaran’ny vidim-piainana ary ahafahana mandrefy ny vidin’ny kojakoja ampiasain’ny isan-tokantrano eo anelanelan’ny vanim-potoana roa ihany koa, raha ny fanazavana hatrany. Nilaza ny solontenan’ny mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika niara-niasa tamin’ny INSTAT tamin’ny famolavolana ny « comptes nationaux » vaovao fa hitarafana ny vokatry ny asan’ny governemanta sy entina hanatsarana politika fampandrosoana ny antontan’isa momba ny toekarena ka ao anatin’izany ny « comptes nationaux » sy ny IPC. Lynda A. Cet article INSTAT: Nivoaka ny « comptes nationaux » sy ny IPC vaovao est apparu en premier sur déliremadagascar.
Task force MEFPTLS-Cnaps: adidy ny fanomezan –jo ny mpiasa
Niisa 68 ny mpampiasa sy ny mpiasa any amin’ny faritra Ihorombe, nahitana distrika telo (Ihosy, Ivohibato, Iakora), nentanin’ny vaomiera manokana Task force, iombonan’ny minisiteran’ny Asa sy ny fampananan’asa ary ny lalàna sosialy (MEFTPLS) sy ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps), nandritra ny telo andro. Nifotoran’ny fotoana ny hananan’ny mpiasa ny fiahiana sosialy, hisian’ny asa mendrika, ka hisitrahan’izy ireo ny fanampiana omen’ny Cnaps, araka ny filankevitry ny minisitra, ny 3 mey teo, ary nananganana ny Task force, hanentana ny mpampiasa ary hampihatra ny lalàna famaizana aorian’ny fe-potoana telo volana. Notetezina ireo orinasa tsy miankina ao amin’ny faritra Ihorombe, niampy ny fiofanana, notarihin’ny talen’ny Fitantanana ny maha olona ao amin’ny Cnaps, Raobijaona Bruno.Nohamafisina nandritra ny fiofanana ny fifanomezan-tanana eo amin’ny minisitera MEFTPLS, ny Cnaps, ny Sampandraharaha misahana ny fitsaboana ho an’ny orinasa tsy miankina (SMIE) ary ny mpampiasa. Toerana telo ny notetezin’ny Task force, Andohan’Ilakaka, i Ranohira ary Ihosy. Tanjona ny hahatonga saina ny mpampiasa fa tena ilaina ny maha olona sy ny fanomezana ny zon’ny mpiasa, ny fitandroana ny fahasalamana.Njaka A.L’article Task force MEFPTLS-Cnaps: adidy ny fanomezan –jo ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.
Fankalazana ny fetim-pirenena: nampiaiky ireo vahiny ny hetsiky ny Foloalindahy
Niavaka! Fahombiazana tanteraka ny an’ny Foloalindahy malagasy nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin’ireo karazana hetsika sy fahaiza-manao nasehon’ny Foloalindahy nandritra ny matso notanterahina teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Nampiaiky ireo vahiny manan-kaja marobe nanatrika izany koa ireo karazana hetsika maro samihafa nataon’ny eo anivon’ny Foloalindahy. Ankoatra ny filoha Paul Kagame sy ireo olo-manan-kaja maro, isan’ireo vahiny nanome voninahitra ny lanonana i Plekhanov Evgeny, filoha tale jeneralin’ny Sarlu Hola Firm. Nizara telo niavaka tsara ny maso: ireo vondron-tafika nandeha an-tongotra nahitana ny fandraisain’anjaran’ireo miaramila frantsay, kaomorianina ary maorisianina. Narahin’ny fampisehoana ireo fiaramanidina vaovao sy helikoptera nomen’ny filoha Rajoelina ary ireo fiara tsy mataho-dalana mifono vy izay vita rosianina, hiadiana manokana amin’ny asan-dahalo, izany. Afaka mandeha amin’ny lalana saro-dalana ireto fiara mifono vy ireto. “Teo koa ny fampisehoana ireo angidimby miisa efatra sy ireo fiaramanidina miisa enina nahitana ilay fiaramanidina CASA mahazaka miaramila miisa 40 ary koa azon’ny vahoaka malagasy ampiasaina amin’ny voina mihatra tampoka”, hoy ny filoha Rajoelina.J.CL’article Fankalazana ny fetim-pirenena: nampiaiky ireo vahiny ny hetsiky ny Foloalindahy a été récupéré chez Newsmada.
Fifamoivoizana eny amin’ny lalam-pirenena: mampidi-doza matetika ireo taksiborosy Sprinter
Tsy iray tsy roa! “Efa zary fahazarana ho anay sisa ny maheno sy miatrika ny lozam-pifamoivoizana ety amin’ny lalam-pirenena, izay haterak’ireo taksiborosy Sprinter ireo”, hoy ny nambaran’ny zandary iray, miasa amin’iny lalam-pirenena faha-7 iny. Ny ankamaroan’ny tranga dia saika vokatry ny fandehanana mafy avokoa, arahina tsy fifehezana ny familiana tampoka na tsy fisian’ny hisatra, raha ny fanazavana hatrany.Tranga iray tao anatin’ny maro ny niseho, ny diva haraina ny alarobia teo, tao Behenjy. Fiara taksiborosy Sprinter iray no nivadika ka latsaka tao amina hady ivelan’ny arabe. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy, fa maromaro kosa ireo naratra izay nentina notsaboina. Araka ny fanazavana, niala fiara iray io Sprinter io, kanefa mafimafy ny fandehany, hany ka tsy nahafehy ny familiana intsony ny mpamily. “Fiara natao handeha mafy mihitsy ny Sprinter, saingy ho an’ny “autoroute”. Mpitondra entana ao anatiny ihany koa, ilay antsoina hoe “fourgon” izy ireny fa tsy natao hitondra mpandeha. Rehefa tonga aty amintsika anefa, vakina dia asiana seza ary lasa mpitatitra olona. Tsy vitan’izay fa mbola asiana fitondrana entana eo amboniny, izay mitondra entana misavovona ka matetika koa mitera-doza izany”, hoy hatrany ny fanazavana nomen’ny zandary iray nanontanianay. Voaporofo tokoa izany amin’ny isan’ny trangana lozam-pifamoivoizana, indrindra ireo hahafatesana olona amin’ny lalam-pirenena. Sao dia fotoana tokony handraisana fepetra mafy kokoa amin’ireo mpitatitra amin’izay? Randria.L’article Fifamoivoizana eny amin’ny lalam-pirenena: mampidi-doza matetika ireo taksiborosy Sprinter a été récupéré chez Newsmada.